WAA MAXAY MYCELIUM (MYCELIUM) IYO SIDA LOO KORO - MUSHROOMS
Marka ugu horreysa waxaan barannaa waxa aan kakooban yahay fasalka bayoolajiga, laakiin qaar badani si buuxda uma fahmin sababta ay muhiim u tahay inay koraan iyo waxa ay isticmaalaan. In this article waxaan fiirin doonaa sida loo koro mycelium ee boqoshaada, faahfaahinta beerista of mycelium, iyo ugu horreyn dhan waxaan fahmi doonaa waxa ay tahay.
Waa maxay mycelium iyo sababta ay u koraan
Inta badan mycelium waxaa sidoo kale loo yaqaan 'mycelium', waxaanu jebinaa waxa uu yahay. Mycelium waa jirdhiska daaqsinka ah ee boqoshaada. Mycelium ee dhismaheeda ayaa ku kala duwanaan kara maqnaanshaha ama maqnaanshaha septa u dhexeeya unugyada, sidaas darteed mycelium wuxuu ka kooban yahay filim khafiif ah, fiilooyin, oo loo yaqaan hyphae, iyo sidoo kale nuclei iyo septa (iyadoo ku xiran nooca mycelium: cenotic ama septate).
Ma taqaanaa? Mycelium ee boqoshaada koray guriga, aad ma cuni karto oo keliya, laakiin sidoo kale cabi, sida Kombucha.
Thanks to guulaha sayniska casriga ah, beerista mycelium ee guriga ayaa kaa caawin doona in la helo goosashada boqoshaada iyada oo aan wax badan oo adag. Mushaharkan ma aha dhadhan sare oo keliya, laakiin sidoo kale waa caawiyayaal wanaagsan oo dabiiciga ah, iyadoo ay gacan ka geystaan ​​geedi-socodka dilaaga ah ee geedaha dhintay. Intaa waxaa dheer, laga bilaabo mexanuun caadiga ah, mid ayaa bilaabi kara wax soo saarka noocyada cagaaran ee boqoshaada, sida champignon, boqoshaada, ama boqoshaada lohodka, ama, iyadoo la beerto myceliums dhul furan, waqti leh si ay u soo ururiyaan boqoshaada caddaan.
Ka hor inta aadan sameynin mycelium, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida saxda ah ee nooca mycelium ee ugu wanaagsan loo isticmaalo beerashada. Waxaan hore u ogaanay in miisaanka kalyaha ee fangasku uu kala duwanaan karo iyadoo la eegayo nooca dhismaha gudaha, iyo xaqiiqda ah in labadan kooxood loo yaqaan 'Mycelium coenotic and mycelium septic'.
Waxaa jira nooc kale, taas oo ku saleysan nooca nafaqo ee maskaxda, halkan waxaad dooran kartaa mycelium hadhuudh, mycelium substrate iyo mycelium dareeraha ah. Mid kasta oo ka mid ah noocyadan ayaa lagu sameyn karaa guriga. Mid kastaa wuxuu leeyahay faa'iido iyo faa'idooyin gaar ah. Tusaale ahaan, mycelium miro substrate ah ayaa si tartiib ah u koraya guriga, laakiin waxaa lagu kaydin karaa tayada badan. Sida for mycelium hadhuudh, noocyada noocan ah laga yaabaa in aan degeyn on qoryaha, iyo muddada kaydinta ma aha dheer; mycelium dareeraha waxaa loo isticmaalaa si aad u yar sababtoo ah baahida korodhka ah ee noocyada noocan ah ee uur-ku-jirka iyo xaaladaha.
Waa muhiim! Cuntada macdanta ayaa doorbideysa dhir-shiidka hadhuudhka ah, si kastaba ha ahaatee, haddii habsocodku uu ku guuldareysto, caaryaalku wuxuu u muuqanayaa inuu si xun u saameeyo dhalidda boqoshaada.
Sida loo abaabulo meel loogu talagalay mycelium sii kordhaya
Mycelium of fungi waa suurtagal in la helo goobta my, laakiin ka hor inta sii koraya guriga waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro xaalado ah koritaanka fangaska. Waxa ugu horeeya ee lagu daryeeli karo waa meesha ay ku koraan mycelium. Qoyaanku waa xaalad muhiim ah halkan, sababtoo ah boqoshaada mid kasta oo qummanba ugu kordhay meelo qoyan, sidaa daraadeed, si ay boqoshaadu uga raali noqdaan beergooyska, qoyaanka waa in uu ahaado heer sare. Qodobka labaad waa in la tixgeliyaa marka la doorto meel uu ku koro mycelium waa heerkulku, waa muhiim in la raaco dhammaan xeerarka halkan, ee aan u oggolaanin dhirta inay kululaadaan.
Ma taqaanaa? Haddii heerkulka qolka uu kor u kaco 30 °C, mycelium ayaa dhiman doona, iyo heerkulka ka hooseeya heerkulka qolka, koritaanka ayaa laga yaabaa in uu gaabiyo.
Waxaa fiican in la doorto meel aan kiniinikada ahayn kaliya meesha heerkulka qolka lagu hayo, laakiin sidoo kale si isbeddel deg-deg ah oo heerkulku u dhaco, waxay si xun u saamayn doontaa mycelium. Sidoo kale, haddii aad ka fekereyso sida loo heli karo mycelium meelaha bannaan, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho in meesha uu si fiican u iftiimayo iyo hawo wanaagsan.
Teknoloji sii kordhaya farsamada mycelium
Kalluunka miraha ka soo baxa hadhuudhka guriga waa tiknoolaji aad u caan ah oo ka mid ah dadka wax soo iibsada. Cagaarshow badarka boqoshaada waxaa inta badan soo saaray shaybaarro si gaar ah loo qalabeeyey, laakiin tiknoolajiyada wax soo saarka uma baahna wax kharash ah iyo dadaal khaas ah. Ka fikir sida loo sameeyo guriga. Ma jiro qorshe keliya oo lagu diyaarinayo mycelium guriga; qof kastaa wuxuu isticmaalaa tiknoolijiyada ugu fiican.
Farsamada ugu fudud waa sidan soo socota:
ku dar dukaanka digsi weyn ama basaasiin aluminiim ah oo ka buuxi biyo si markaa miro la qariyo 2-3 cm;
ku rid kariyaha iyo karkari ilaa 30 daqiiqadood;
saaro, xayirna oo ku qallal dusha dhul ballaadhan;
waxaynu ku dhufannaa hadhuudh ku yaal bangiyada 2/4;
Nadiifi dhalooyinka ku jira digsi weyn;
bangiyadu waa inay qaboojiyaan, ka dibna midkale kasta oo jiifay miisaan yar.
Waxaad ogaan doontaa calaamadaha ugu horreeya ee koritaanka mycelium saddex maalmood - cadaanku hoos ayuu u muuqan doonaa, laakiin miisaankuna wuxuu noqonayaa mid la dareemo toddobaad gudihiis. Toddobaad ka dib, mycelium waxaa lagu beeray karaa caws iyo bilaabi inuu koro boqoshaada.
Waa muhiim! Ka hor inta aan la beeriinin mycelium ee dhexdhexaad ah nafaqo, waa in la nadiifiyaa, oo dhan manipulations waxaa lagu sameeyaa sida ugu fiican ee iftiinka iftiinka quartz si looga hortago infekshanka mycelium by microbes.
Sidee u koraan mycelium ka lugood oo ah on musqusha
Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo ay u koraan mycelium, mid ka mid ah kaas oo sii kordhaya mycelium on kartoonka. Kaarku waa mid aan qaali ahayn oo la heli karo. Intaa waxaa dheer, kaararka ayaa ka sameysan qoryo, iyo mycelium ayaa ka badbaaday si ka wanaagsan, iyo kaararka gogosha leh ayaa u oggolaan doona boqoshaada mustaqbalka inay neefsadaan, taas oo gacan ka geysan doonta horumarka mycelium.
Tiknooloojiyada mycelium sii kordhaya ee lugaha Musqulaha ee kaarbooni kartooneed waa mid fudud:
googo gogol ah adigoon ku dhajin karin calaamadaha biyo diirran saacad, inkastoo, haddii ay biyaha ku jiraan, ma sii xumaanayso;
fangaska waa in loo kala qaybiyaa jilicsan adoo isticmaalaya mindi fiiqan ama maqashi;
in taangiga aad u socoto in uu ku beero mycelium, waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto godad for socodka qoyaan xad dhaaf ah;
Laga soo bilaabo kartoonada aad u baahan tahay inaad si taxaddar leh uga saarto lakabka sare;
gelin boqoshaada on kartoon iyo daboolaa lakabka saaro hore;
Ku rid boorsada wax walxaha ku rid weelka, iyaga oo burburinaya;
weelka waa in lagu daboolaa polyetylen;
calaamada ugu horeysa ee qalajinta kaararka - qoyan dhalada buufinta;
xirmo baayac maalin kasta si aad wax u daaweyso.
Dhowr usbuuc ka dib (celcelis ahaan 3 ilaa 6), kaararka ayaa soo rogi doona caddaan iyo ka bax, ka dibna waxaa lagu beddeli karaa dhexdhexaad nafaqo leh.
Sida aad u arki karto, boqoshaada sii kordhaysa waa shaqeyn la awoodi karo. Mycelium ayaa kaa caawin doonta inaad ka soo gasho caleenta boqoshaada marka ay dhibaato la'aan tahay, waxa ugu muhiimsan waa rabitaan iyo dulqaad.